Vahaolana fitrandrahana varavarana kely indrindra - Zhongshan City YALIS Hardware Products Co., Ltd.
Tanana mihaja amin'ny varavarana lafo vidy
Vahaolana fitrandrahana varavarana kely indrindra
Tamin'ny taona 80 sy 90 lasa mpanjifa lehibe sy ny lazan'ny fomba minimalista sy ny ankohonana namboarina, ny indostrian'ny varavarana sy ny indostrian'ny profil aluminium dia namorona varavarana minimalist (ao anatin'izany ny varavarana tsy hita maso sy ny varavarana avo avo) mba hahafaly ny filan'ny tsena.
Ny varavarana minimalista dia tsy afaka manitatra ny habaka amin'ny fahitana fotsiny, fa koa mifangaro amin'ny habaka ankapobeny mba hitazomana ny firaisan'ny habaka. Noho izany, YALIS dia namolavola hidin-trano minimalist hidin-trano mifototra amin'ireo toetra mampiavaka ny varavarana minimalista.
Tanana am-baravarana Series MULTIPLICITY
Mba hampifangaroana ny vodin-trano sy ny varavarana, YALIS dia nandefa andian-tsarimihetsika MULTIPLICITY tamin'ny taona 2020, natao indrindra ho an'ny varavarana minimalista avo lenta, miaraka amin'ny fombany minimalist, hahazoana vokatra mifameno.
1. Ny fampidirana ny tantana am-baravarana dia azo ampiasaina ambonin'ny varavarana, mba ho fitambarana tonga lafatra amin'ny varavarana.
2. Ny tantana dia vita tamin'ny profil aluminium, izay azo tsaboina miaraka amina famaranana toy ny endrin'ny alimina an'ny varavarana minimalist.
3. Ny firafitry ny fanokafana ny ady amin'ny herisetra ataon'ny patanty dia mahatonga ny vavahady hihazona tsy mora tohina ary lava ny androny.
4. Ny fonosana dia voasarona amin'ny tanan'ny nilona mba hisorohana ny votra.
5. Ny tranga fitokonana azo ovaina dia afaka mampihena ny fahasarotana fametrahana ary manatsara ny fahombiazan'ny fametrahana.
Mikendry ny toetoetran'ny varavarana minimalista, YALIS koa dia namolavola tantana varavarana andian-dahatsoratra RAINBOW. Toy ny MULTIPLICITY, RAINBOW koa dia mifikitra amin'ny foto-kevitra amin'ny fampidirana hidin-trano sy hidin-trano hihazonana ny firaisan'ny habaka.
3. Ny elanelan'ny afovoan-tokana dia miova avy amin'ny 40mm ka hatramin'ny 45mm, ary ny lavaka fantsom-baravaran'ny vavahady dia manamboatra endrika hafahafa hisorohana ny tanana tsy hikasika ny tahony rehefa manodina ny bokotra.
4. Ny firafitry ny lohataona tokana dia manakana ny vavahady tsy hihantona.
5. Ny sakan'ny tantaram-baravarana dia 40mm, izay mifanaraka kokoa amin'ny haben'ny tanan'olombelona ary manatsara ny fahatsapana.
Ny savily varavarana miafina dia manana ny fiasan'ny savily nentim-paharazana nefa tsy nanimba ny hakanton'ny varavarana minimalista. Miaraka amin'ny andian-tsarimihetsika YALIS MULTIPLICITY sy andian-dahatsoratra RAINBOW, azon'izy ireo atao ny manatsara ny hatsaran'ny varavarana minimalista.